“Waxaan muujinay awooda kooxdeena.” – Ralf Rangnick kaddib guushii Man United ay ka gaartay Burnley – Gool FM
(Manchester) 31 Dis 2021. Tababaraha kooxda Manchester United Ralf Rangnick ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay kaddib guushii ay ka gaareen Burnley.
Manchester United ayaa guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Burnley oo marti ugu ahayd garoonka Old Trafford, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Kaddib ciyaarta shabakada My Network ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay tababare Ralf Rangnick, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Sida la filayay waxay ahayd ciyaar awood jireed, oo aan la ciyaarnay koox ciyaareysa awood jireed oo aad u weyn.”
“Waxaan sidoo kale soo bandhignay awooda aan ku heysano kooxdeena, waxaana maanta muhiim aheyd inaan sare u qaadno heerka awoodeena.”
“Qaab ciyaareedka kooxda oo dhan aad ayuu u fiicnaa, waan ku faraxsanahay qaab ciyaareedka xiddigaha garbaha, Jadon Sancho, Mason Greenwood iyo Cristiano Ronaldo, dadaalka shaqada ayaa ahaa mid aad u fiican.”
“Diiradaydu waa ciyaartoyda haatan, waxaana kooxda ku haysanaa ciyaartoy nagu filan.”
“Kuma faraxsani Chelsea!” – Lukaku oo dab ku sii shiday tababare Thomas Tuchel